Curecoin စျေး - အွန်လိုင်း CURE ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Curecoin (CURE)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Curecoin (CURE) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Curecoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $785 271.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Curecoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Curecoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
CurecoinCURE သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0908CurecoinCURE သို့ ယူရိုEUR€0.0765CurecoinCURE သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0692CurecoinCURE သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0825CurecoinCURE သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.815CurecoinCURE သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.57CurecoinCURE သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč2CurecoinCURE သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.337CurecoinCURE သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.121CurecoinCURE သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.126CurecoinCURE သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$2.04CurecoinCURE သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.704CurecoinCURE သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.483CurecoinCURE သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹6.8CurecoinCURE သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.15.27CurecoinCURE သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.124CurecoinCURE သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.137CurecoinCURE သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿2.82CurecoinCURE သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.63CurecoinCURE သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥9.59CurecoinCURE သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩107.63CurecoinCURE သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦35.09CurecoinCURE သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽6.63CurecoinCURE သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴2.51
CurecoinCURE သို့ BitcoinBTC0.000008 CurecoinCURE သို့ EthereumETH0.000228 CurecoinCURE သို့ LitecoinLTC0.00153 CurecoinCURE သို့ DigitalCashDASH0.000996 CurecoinCURE သို့ MoneroXMR0.00102 CurecoinCURE သို့ NxtNXT7.27 CurecoinCURE သို့ Ethereum ClassicETC0.0124 CurecoinCURE သို့ DogecoinDOGE25.09 CurecoinCURE သို့ ZCashZEC0.000955 CurecoinCURE သို့ BitsharesBTS3.44 CurecoinCURE သို့ DigiByteDGB3.49 CurecoinCURE သို့ RippleXRP0.299 CurecoinCURE သို့ BitcoinDarkBTCD0.0031 CurecoinCURE သို့ PeerCoinPPC0.308 CurecoinCURE သို့ CraigsCoinCRAIG40.93 CurecoinCURE သို့ BitstakeXBS3.83 CurecoinCURE သို့ PayCoinXPY1.57 CurecoinCURE သို့ ProsperCoinPRC11.27 CurecoinCURE သို့ YbCoinYBC0.00005 CurecoinCURE သို့ DarkKushDANK28.8 CurecoinCURE သို့ GiveCoinGIVE194.43 CurecoinCURE သို့ KoboCoinKOBO19.81 CurecoinCURE သို့ DarkTokenDT0.0837 CurecoinCURE သို့ CETUS CoinCETI259.24
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Wed, 05 Aug 2020 18:40:01 +0000.